Debt Collection Lawyers in Nigeria - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
သငျသညျနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူသင်၏ငွေသွင်းငွေထုတ်၏သင်တန်းတစ်ခုမတည်မငြိမ်အကောင့်သို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုတစ်ခုကိစ္စတွင်နှငျ့ရငျဆိုငျနေတယ်ဆိုရင်, ပြီးနောက်သင်လုံခြုံလိုအပ်ပါတယ်, အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သော, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြွေးမြီစုဆောင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ.
Lex Artifex LLP မှာ, ကျွန်တော်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီမဟုတ်. ကျနော်တို့ထူးချွန်အကြွေးတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက် client များအတွက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ထားတဲ့များအတွက်တတ်ကျွမ်းနည်းလမ်းအဖြစ်နိုင်ဂျီးရီးယားတစ်လျှောက်လုံးစုဆောင်းခြင်းနှင့်တရားန်ဆောင်မှုများကိုစုဆောင်းခြင်းရှေ့နေများဖြစ်ကြသည်.
အဆိုပါ ကြွေးမြီစုဆောင်းခြင်းရှေ့နေများ Lex Artifex LLP မှာ, မဆိုမရတဲ့အကောင့်ပေါ်တက်မပေးပါဘူး, ငွေပေးချေမှုလာပြီဖြစ်သထေူဘယ်လောက်ခက်ခဲနေပါစေ. ကျနော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်ပြည်ပ clients များနှစ်ခုလုံးကိုကိုယ်စားပြု: တစ်ဦးချင်းစီ, န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများသည်, ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်သည်, ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ, အစိုးရအေဂျင်စီများ, as well as law firms both directly or through their collection agencies.
ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးပေါ်စျေးနှုန်းများအနေဖြင့်အထိ 5% – 50% စုဆောင်းမှု၏အမျိုးအစားနှင့်ယင်းအရေးဆိုမှု၏ပမာဏပေါ် မူတည်.. တရားစွဲဆိုခြင်း, ကျွန်တော်တစ်ဦးအားသွင်း 5% non-contingent suit fee to apply against our contingent rates. Flat rates are also available on request.
အဆိုပါ Lex Artifex LLP ကြွေးမြီစုဆောင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် lexartifexllp@lexartifexllp.com. အဆိုပါရှေ့နေများဘာသာစကားဘာသာပြန်များမှတဆင့် Non-အင်္ဂလိပ်စကားပြော clients များနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့အလုပ်အတွက်တတ်ကျွမ်းများမှာ.
Lex Artifex LLP ရဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အကြွေး Recovery ကိုအလေ့အကျင့် Group မှ